May 4, 2021 - Achawlaymyar
အရမ်းကောင်းလို့မျှဝေလိုက်ပါတယ် အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ တွင်းတစ်တွင်းထဲ ခုန်ချလိုက်သလိုပဲ အရမ်းကောင်းလို့မျှဝေလိုက်ပါတယ် အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ တွင်းတစ်တွင်းထဲ ခုန်ချလိုက်သလိုပဲတဲ့ .. ။ အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ တွင်းတစ်တွင်းထဲ ခုန်ချလိုက်သလိုပဲ … ။ ဒီတွင်းဟာ ဒုက္ခတွင်း မဖြစ်နေဖို့လိုတယ် … ။ တွင်းအတိမ်အနက်ကို မသိပဲ ရမ်းသန်းခုန်ချလိုက်လို့ တွင်းအောက်ခြေရောက်မှ အမှိုက်တွင်းဆိုသေရော … နက်ရင်နက်သလောက်ပြန်တက်ရခက်သွားပြီ တွင်းထဲကအမှိုက်တွေနဲ့ နေပေရော့ တစ်သက်လုံး …. တစ်ချို့တွင်းတွေက ဖြတ်လျှောက်သွားရုံနဲ့ အနံ့သက်မကောင်းလို့ ကျော်သွားလို့ရတယ် …. ။ တစ်ချို့တွင်းနက်တွေကျတော့ အောက်ခြေဘယ်လောက်ရှိမှန်းမသိတော့ အနံ့သက်မသိ ဘာရှိမှန်းမသိ ခုန်ဆင်းလိုက်တော့မှ အမှောင်ထဲမှာ အနံ့ဆိုးတွေနဲ့ အဖေါ်ပြုသွားရတယ် …. ။ ဒီတော့ တွင်းတစ်တွင်း နဲ့ တူတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို အပေါ်ယံလေးရှပ်ကြည့်ပြီး … Read more
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆိုရိုးစကား များစွာရှိနေပါတယ်။ သင်ဟာ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိပြီဆိုတာနဲ့ ဒီဆိုရိုးစကားလေးတွေဟာ သင့်နှလုံးသားကို ရိုက်ခတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီဆိုရိုစကားတွေဟာ ဘာတွေများ ဖြစ်လိမ့်မ (ဂရိ) – အချစ်ရှိတဲ့ နှလုံးသားက အမြဲနုပျိုနေတယ်။ (အီတာလျံ) – အချစ်ဦးနဲ့ တူတဲ့ အချစ်ဆိုတာ ဘယ်သောအခါမှ မရှိနိုင်။ (ပြင်သစ်) – အချစ်အတွက် အကြောင်းပြချက်ရှာဖို့ ကြိုးစားလေလေ အကြောင်းပြချက် မဲ့သွားတတ်လေလေပါပဲ။ (အာရေဗျ) – လူတစ်ယောက်ကို မျက်စိလည်းမမြင် နားလည်းမကြားအောင် လုပ်နိုင်တာ အချစ်ပဲရှိတယ်။ (တရုတ်) – ချစ်သူတွေရဲ့ နှလုံးခုန်သံထပ်တူကျအောင် ချည်နှောင်ပေးတတ်တာက အချစ်ဖြစ်တယ်။ (အိန္ဒိယ) – မဖြစ်နိုင်တာကို ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာ အချစ်ကြောင့်ပါပဲ။ (အာမေးနီးယန်း) – လူတစ်ယောက်မှာ နားရွက်သုံးခုရှိပါတယ်။နှစ်ခုကတော့ ဦးခေါင်းရဲ့ … Read more
၁ – အချစ်ရေးကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေကို စွန့်လွှတ်တာမျိုးမလုပ်ပါဘူး။ ချစ်သူရည်းစားရသွားတဲ့အခါ တစ်ချို့အမျိုးသမီးတွေဟာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကို အလေးမထားတတ်တော့ကြပါဘူး။ ၂ – ရည်းစားရလက်ထပ်တဲ့အခါ ငွေကြေးအရလွပ်လပ်မှုကို စွန့်လွှွှတ်လိုက်တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ဖက်လူက ဘယ်လောက်ပဲငွေရှာကောင်းပါစေ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ငွေရှာနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းကို ဘယ်တော့မှမစွန့်လွှတ်ပါနဲ့။ ဒါကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရင် သင့်ရဲ့လွပ်လပ်မှုကိုပါ စွန့်လွတ်သလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ၃- လက်တွဲဖော်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကိုပဲ အာရုံစိုက်မနေဘူး။ ၄ – အချစ်ရေးကြောင့် ကိုယ့်အိမ်မက်တွေကို မစွန့်လွှတ်ဘူး။ ၅ – အချစ်ရေးကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှုကို မစွန့်လွှတ်ဘူး။ ၆ – ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားဘူး။ ၇ – ရင့်ကျက်တဲ့မိန်းမတွေဟာ သူတို့ရဲ့လူနဲ့ အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရနေရမယ်လို့ မတွေးဘူး။ သူ့ဘဝမှာလည်း သူဟာနဲ့သူ အလုပ်ရှုပ်နေတာတွေရှိနေမယ်ဆိုတာကို နားလည်တယ်။ ၈ – ဆုံးဖြတ်ချက်ချစရာရှိတဲ့အခါ သူတို့လူကိုပဲ … Read more
Unicode) ၁။ ခရီးမသွားခြင်း ခရီးသွားခြင်းဟာ ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာပဲ သွားလို့ကောင်းပါတယ်။ ပျော်ရွင်မှု့အပြည့်အဝခံစားနိုင်တဲ့အပြင် လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ကျန်းမာရေး စတဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခရီးသွားဖို့ခက်ခဲတဲ့ အပြင် သွားဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှ ငယ်စဉ်ကလောက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် မပျော်နိုင်တော့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ သင့်တော်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခြင်း ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးဆိုရင် အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ သင်ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်းချင်ရင် အခုငယ်တုန်းမှာ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ ၃။ ထွက်သင့်တဲ့အလုပ်က မထွက်ခြင်း တစ်ခါတစ်ရံမှာ တစ်ချို့လူတွေဟာ ကိုယ့်အတွက် တက်လမ်းမရှိသောအလုပ်ကို ထွက်သင့်မှန်းသိပါလျှက် မထွက်ပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အသက်ကြီးလာတဲ့အထိ အလုပ်တစ်ခုတည်းမှာလုပ်ပြီး ဘာမှသိသိသာသာ မတိုးတက်လာတဲ့ လူတစ်ချို့ကို သင်မြင်ဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ထွက်သင့်တဲ့အချိန်မှာထွက်ပြီး ကိုယ့်တိုးတက်မှု့ကိုပေးမယ့်အလုပ်ကို … Read more
မုတ်သုန်ခေါ်လာနိုင်သောမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာတော့မလား မုန်တိုင်းတစ်ခုရဲ့ဖြစ်စဉ်အစကို လေ့လာကြည့်ရင်လေထုဖိအားကျဆင်းနေရမယ် လေထုမညိမ်သက်မှု့တွေဖြစ်နေရမယ် ဒီဖြစ်စဉ်အနေအထားတွေကတော့လက်ရှိလေထုလှုပ်ရှားမှု အနေအထားအရကပ္ပလီပင်လယ် တောင်ဘက်မှာ ပြည့်စုံနေပါပြီ ဒါဆိုရင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဖြစ်ဖို့မေလ ပထမအပတ်လောက်မှာ ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိလာနိုင်တယ်။ နောက်ကျလွန်းရင် နှစ်ရက်ပေါ့။‌အဓိကက လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းစဖြစ်လာရင်တော့ မုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့ သေချာပါပြီး။ ဒီမုန်တိုင်းက- ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ- ရန်ကုန်တိုင်း- မွန်ပြည်နယ်တို့ အတွက် စိုးရိမ်စရာတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ် အဓိကကတော့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသပေါ့။ မုန်တိုင်းဖြစ်လာရင်တော့အနောက်တောင်မုတ်သုန်ကိုလည်းခေါ်လာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် တနင်္သာရီတိုင်းဘုတ်ပြင်းဘက်မှာ စောစောဝင်လာနိုင်တယ်။ မုန်တိုင်း ဖြစ်လာရင်လည်းဆိုင်ကလုန်အဆင့်ထိဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့်ကြိုတင်သိရှိနိုင်အောင် မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ခြေကိုကြိုတင်အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီမုန်တိုင်းကဖြစ်လာခဲ့ရင်အားအင်ကြီးမား ပြင်းထန်နိုင်လို့သတင်းအဆက်မပြတ် သိရှိဖို့‌တော့လိုအပ်နိုင်တယ် လေထုလှုပ်ရှားမှု့တွေ ပြောင်းလည်းမှုတွေကိုချက်ချင်းတင်ပေးနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားပေးနေပါတယ် အကုန်သိရှိစေဖို့အတွက်က Like / share ထားပေးကြပါ။သ‌ဘာဝဘေး ဆိုတော့မဖြစ်လာခဲ့ရင်အကောင်းဆုံးပါ ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ ကြိုတင်သိရှိကာကွယ်ထားသဖြင့်အထိအခိုက်အပျက်အဆီးနဲနိုင်သလိုလူအသေအပျောက်လည်းနဲလာနိုင်လို့ကြိုတင်ပြီးအသိပေးထားတာပါ။ ဆက်လက် စောင့်ကြည့်ကြပါစို့။ HtayAung ———————– မုတ္သုန္ေခၚလာနိုင္ေသာမုန္တိုင္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့မလား မုန္တိုင္းတစ္ခုရဲ႕ျဖစ္စဥ္အစကို … Read more
Speed အားဖြည့် အချိုရည်ဗူးကို အသက်၁၈နှစ်အောက် ကလေးတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့နို့တိုက်မိခင်တွေ၊ ကဖင်းနဲ့ ဓာတ်မတည့်သူတွေ သောက်သုံးဖို့ မသင့်ပါဘူးတဲ့ ခင်ဗျာ။ တစ်နေ့ကို ၂ ဘူးထက် ပို မသောက်ဖို့ကိုလည်း ဘူးပေါ်မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ် ခင်ဗျာ။ သ ကြား ပ မာ ဏ အ များ အ ပြား ပါ ဝင် တဲ့ အ တွက် ကြောင့် သွေး ချို ဆီး ချို ဝေ ဒ နာ ရှင် များ လည်း သောက် သုံး ဖို့ မ သင့် ပါ ဘူး။ အရင်တုန်းက အခုလို သတိပေး … Read more
မိန်းမတယောက် ယောက်ျားတယောက်ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် သေအောင်ဆိုးလည်း သီးခံတယ် အပြစ်တွေလုပ်လည်း ခွင့်လွှတ်တယ် အချိုးမပြေလည်းပြုပြင်ယူတယ်အားနည်းချက်ရှိလည်းနားလည်ပေးတယ် ကိုယ့်ကိုဂရုမစိုက်ရင်တောင် အလုပ်ရှုတ်နေလို့ဆိုပြီး ဖြည့်တွေးတယ် သူကြောင့် ကိုယ်တနေ့လုံးငိုရတာကို သူကြောင့်ကိုယ် တစ်နာရီလောက် ရယ်မောရတာကို ပြန်တွေးပြီးတော့ ပိုပြီးချစ်တက်ကြတယ် အများစုကပြောကြတယ် မိန်းမဆိုတာ ကိုယ့်ကိုမျက်ရည်ကျအောင် ငိုစေအောင်လုပ်တဲ့သူကိုမှ ပိုပြီးချစ်တက် ကြတယ်တဲ့ အဲ့ဒါမှားတယ် မျက်ရည်ကျအောင်လုပ်တဲ့ သူမှ ချစ်တာ မဟုတ်ဘူး မိန်းမဆိုတာ သူတကယ်ချစ်မှသာ ယောက်ျားတယောက် အတွက် မျက်ရည်အကျခံတာပါ မချစ်မှန်းမချစ်လို့ကတော့ တဘက်ယောက်ျား ကိုယ့်ကိုသေအောင်ချစ်ပြနေလည်း ရင်တောင်မခုန်ဘူး သဲသဲလှုပ်အောင် ချစ်ပြလေ အမြင်ကပ်လေပဲ အနားကမခွာလေ ပိုပြီး ကြည့်မရလေပဲ ကိုယ့်အပေါ် ဂရုစိုက်လေ ချေချင်လေ ကိုယ်ကြောင့် ယောက်ျားကြီးတန်မဲ့ ငိုရင်တောင် ဘာလားဟ ရူးကြောင်ကြောင်နဲ့ ယောက်ျားကြီးတန်မဲ့နဲ့ မျက်ရည်လွယ်တယ် ဆိုပြီးတော့တောင် … Read more
ခေါင်းဖြီးလို့ ဆံပင်တွေကျွတ်လာရင် စိတ်ညစ်ရသလို၊ ဆိုင်မှာခေါင်းသွားလျှော်ရင်လ ဲအစ်မဆံပင်တေ ွကျွတ်တယ်နော် ပြောရင် စိတ်ပိုညစ်ရပါတယ်။ အမှတ်မထင်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့တဲ့ဆေးနည်းလေးနဲ့ စမ်းလုပ်ကြည့်တာ အဆင်ပြေလို့ ကိုယ့်လိုစိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေ အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီ ဆေးဘက်ဝင်တာသိပေမဲ့ ကြက်သွန်နီကိုကြိတ်ပြီး ခေါင်းပေါ်လိမ်းတဲ့အခါ ကြက်သွန်စိမ်းနံ့ပျောက်ဖို့ိ တော်တော်ခေါင်းလျှော်ယူရတာ ကျွန်မအတွက် ်သိပ်အဆင်မပြေဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီနည်းလေးကတော့ တော်တော်အဆင် ပြေပါတယ်။ လုပ်နည်းအဆင့်ဆင့် ဆန်ကိုပန်ကန်လုံးလေးနဲ့တစ်ခွက်ယူပါ။ ဆန်ကိုထမင်းချက်သလိုပဲ နှစ်ကြိမ်လောက်ဖွဖွလေးဆေးပါ. ဆေးထားတဲ့ဆန်ကို နှစ်နာရီလောက်စိမ်ထားလိုက်ပါ ရေနည်းနည်းနဲ့ပဲစိမ်ပါ. ကြက်သွန်နီကိုအခွံခွာပါ ကြက်သွန်နီကို ရှစ်စိပ်စိပ်လိုက်ပါ (ကျွန်မကတော့ဆန်ပန်းကန်လုံး တစ်ခွက်ဆို ကြက်သွန်နီနှစ်လုံး သုံးပါတယ်) ဆန်နဲ့ကြက်သွန်စိပ်ထားတာရောလိုက်ပါ ရေနည်းနည်းထပ်ထည့်ပေးပါ မီးဖိုပေါ်မှာ ပွက်ပွက်ဆူအောင် မွှေပေးပါ ဆန်နည်းနည်းကျေတဲ့အထိထားပါ ..(ဆန်ပြုတ်အဆင့်မရောက်ပါ) အဲ့လောက်ဆို ..ရေစစ်ထဲကိုထည့်ပြီး အရည်ညစ်ယူပါ။ ရေကုန်သွားအောင်ညှစ်ပါ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်သိမ်းပြီးတစ်ပတ်လောက်ထားသုံးလို့ရပါပြီ ဆန်မှာပါဝင်သောအာဟာရဓာတ်များနှင့်ကြက်သွန်နီမှာပါဝင်သောဓာတ်များကြောင့်ဆံပင်အတွက်အကျိုးပြုပါတယ်။ပြုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြက်သွန်နံ့လဲမနံ့ပါဘူး။ ဘာတွေထူးခြားလာလဲဆိုတော့.. ဆံပင်ကျွတ်တာလုံရပ်သွားပြီးအမြဲဦးရေပြားပူနေတတ်တဲ့ကျွန်မဦးခေါင်းအရေပြားလဲသိသိသာသာအပူလျော့ကျလာပါတယ်။ … Read more
ယောက်ျားလေးတွေ တကယ်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးကိုပဲ လုပ်ပေးလေ့ရှိတဲ့ အရာ (၅)ခု အမှန်တကယ် ရူးရူးမူးမူး ချစ်မိပြီဆို ချစ်သူအတွက် ဘာပဲလုပ်ပေးရ လုပ်ပေးရဆိုတဲ့ ခံယူချက်မျိုးတွေအထိ ရှိလာကြ တာ ယောက်ျားလေးရော မိန်းကလေးရော အတူတူပါပဲ။ အခုတော့ ယောက်ျားလေးတွေ ရှုထောင့်ကနေ ယောက်ျားလေးတွေအနေနဲ့ သူတို့တကယ်ချစ်တဲ့ သူကိုပဲ လုပ်ပေးလေ့ရှိတဲ့ အရာလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်… ချစ်သူစကားကို နားထောင်တယ် ယောက်ျားလေးတွေ တကယ်ချစ်ပြီဆို သူတို့ချစ်ရတဲ့သူ၊ ချစ်သူရဲ့စကားကို သေချာ နားထောင်တယ်၊ အဆုံးစွန်အထိ လိုက်လျောတယ်။ သူတို့ဆီကနေ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး အကြံဉာဏ်တွေ ရယူနိုင်တယ်… အလေးထား ဆွေးနွေးတယ် သင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အဆင်မပြေမှုတွေ၊ သင်ရင်ဖွင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အလေးထား ဆွေးနွေးတယ်။သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေတစ်ခု ရဖို့ ကူညီ … Read more
အဖော်ဆိုတာ အမြဲတမ်းလိုအပ်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ကျွန်တော်မကြာခဏ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးဖြစ်တယ် ကိုယ့်ကို သောကတွေပေးမယ့် အဖော်ဆိုရင် မလိုအပ်တာ မလိုချင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ကိုယ့်အပေါ် နားလည်မှုမရှိတဲ့ Relationship တစ်ခုကို ဆက်ပြီး ဖက်တွယ်ထားတာထက်စာရင် တစ်ယောက်တည်းနေတာ ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ကိုယ့်ကိုမြင်တယ် ကိုယ်အများကြီး မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးသလို အများကြီးလဲ နာကျင်ခဲ့ရပြီးပါပြီ ။ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ တခြားတစ်ယောက်အပေါ် မျှော်လင့်နေရခြင်းတွေ စောင့်ဆိုင်းနေရခြင်းတွေဟာ တကယ်တော့ သိပ်ကို ပင်ပန်းစေပါတယ် လွယ်လွယ်လေးပြောလိုက်တာတွေကအစ နင့်နေအောင်ခံစားပြီး မျှော်လင့်စောင့်ဆိုင်းနေရတာမျိုးက ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးတွေပဲ ကျစေသလိုလို သိမ်ငယ်သလိုလို အမျိုးမျိုးပါပဲ ကိုယ့်အနားမှာ ရပ်ပြီး တခြားရင်ဘတ်ကို တမ်းတနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုလဲ အလိုမရှိဘူး သစ္စာတရားကို စာလုံးတေင်မပေါင်းတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်လဲ မလိုချင်ဘူး ကိုယ်က သာမန်ထက်ပိုပြီး အစွဲအလမ်းကြီးတတ်သလို သာမန်ထက်ပိုပြီးလဲ မျှော်လင့်တတ်ခဲ့ပါတယ် အဲ့တာတွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆင်ခြင်ပါတယ် … Read more